Mashiinka Milling Universal, Vertical, Horizontal, Soo-saareyaasha Shiinaha
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga1 / Universal Vertical Horizontal Milling Machine - Shiinaha saaraha ...
MAKIINADDA QAARKOODKA QAADASHADA EE BULSHADA EE BILAASHTA BIRTA
Tsinfa waa soo saare xirfadle ah & soo saaraha qalabka mashiinka ee Shiinaha. Taxanahan makiinadaha wax lagu shiido ee caalamiga ah waa nooc ka mid ah qalabka mashiinka waxqabadka badan, oo leh qiime aad u sarreeya. Waxqabadka waxsoosaarka birta ayaa sidoo kale aad u sarreeya.
Qiime ahaan, marka aad iibsaneysid mashiinkan wax lagu shiido guud, una dhigma iibsiga 4 nooc oo ah mashiinka wax shiida: mashiinka wax lagu shiido oo qumman, mashiinka wax lagu shiido oo jiifa, nooca wan ee wax lagu shiido, mashiinka wax lagu shiido madaxa ee wareega rogrogmi kara 360 darajo, si wax ku ool ah u yareyn kara kharashyada wax soo iibsigaaga. Marka la eego waxqabadka, marka la barbardhigo mashiinnada wax lagu shiido ee caadiga ah, taxanahan mashiinnada wax lagu shiido ee guud waxay leeyihiin adkeyn iyo xasillooni ka wanaagsan, iyaga oo wax badan gooya.
Su'aalo?Naga soo wac lambarka + 86-15318444939, oo la hadal mid ka mid ah khubaradayada khubarada ah.Waxaad sidoo kale buuxin kartaa foomkeena xiriirka
Hordhaca shaqada ugu weyn:
Mashiinka axdi qarameedka Universal waa qalab mashiin leh mashiinka wax lagu shiido ee wax lagu shiidayo. Dunmiiqa waxay kaxaysaa mashiinka wax lagu jaro si uu u rogrogo, furfurka hogaamiyana wuxuu u kaxeeyaa laydhka inuu u dhaqaaqo bidix iyo midig, kor iyo hoos, si loo farsameeyo qaabka loo baahan yahay. Kala duwanaanta mashiinka wax lagu shiido aad buu u baaxad weyn yahay, wuu baaraandegi karaa diyaaradda jiifka ah, dusha sare ee toosan, keyway, T-jeex, jeex jeex jeex ah, marsho, usheeda dhexe, qulqulka, dusha wareega iyo wixii la mid ah. Iyada oo loo marayo madaxa wax lagu shiido, mashiinnada xagasha badan ayaa lagu fulin karaa. Marka barta mashiinka wax lagu jaro ee jiifka ah lagu rakibo wiishka weyn, axdi qarameedka sidoo kale waa la fulin karaa, iyo dhowr miinshaar oo miinshaarro goynaya ayaa hal mar la xiri karaa. Waa mid aad waxtar u leh.
Mashiinka axdi qarameedka Universal ee iibka ah, sawirka, faahfaahinta:
Mashiinka Milling Universal WN736
Cabbirka miiska （mm）: 1500 * 360
Jadwalka miiska: 900 * 320 * 450
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 4kw
Xagalka wareegga ee madaxa awivel: ± 360 °
Mashiinka Milling Universal WN736A
Cabbirka miiska (mm): 1600 * 360
Jadwalka miiska: 900 * 300 * 390
Xagalka wareegga ee madaxa wareegaya: ± 360 °
Mashiinka Milling Universal WN736C
Miiska miiska (mm): 1600 * 320
Jadwalka miiska: 800 * 310 * 420
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 7.5kw
Mashiinka Milling Universal WN736D
Miiska miiska (mm): 2000 * 400
Jadwalka miiska: 1200 * 315 * 385
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 11kw
Mashiinka Milling Universal XN26
Miiska miiska (mm): 1200 * 280
Jadwalka miiska: 650 * 200 * 450
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 2.2kw
Mashiinka Milling Universal XN32
Miiska miiska (mm): 1500 * 320
Jadwalka miiska: 800 * 300 * 450
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 3kw
Miiska miiska (mm): 1270 * 254
Safarka miiska X / Y / Z (mm): 700 * 400 * 500
Xagalka wareegga ee madaxa wareegaya: ± 45 °
Taabashada dunmiiqa: R8
Safarka miiska X / Y / Z (mm): 900 * 300 * 350
Taabashada dunmiiqa: NT40
Feature ee mashiinka axdi qarameedka universal:
Madaxa wax shiidaya wuxuu rogrogmi karaa 360 digrii
Madaxa wax lagu shiido wuxuu leeyahay adkeyn adag iyo xasillooni wanaagsan
Laba - jarjar mashiinka dhidibka, quudinta otomaatiga ah
Wiish Z-dhidibka korontada
Ikhtiyaariga ah ikhtiyaari ahaan: madaxa tusmada guud, miiska wareega, muuqaalka dhijitaalka ah (DRO), usha wax lagu shiido ee jiifka ah
Madaxa kala qaybinta Universal iyo X axdinta fur hoggaanka ayaa xaqiijin kara isku xirnaanta, si loo sameeyo makiinadda fur
Waa maxay mashiinka wax lagu shiido ee guud? Qaybaha, Qaab-dhismeedka:
2 lugo gacan
3 Gogosha shaqada
4 madaxa axdi qarameedka Rotary
5 dunmiiqa Horizontal
6 Isbedelka xawaaraha
7 Sadarka taagan
Habka wax soo saarka mashiinka shiida ee Universal control Xakamaynta tayada）
1.Waxaa loo marayaa falanqaynta curyaaminta cilmiga softiweer ee saddexda geesood ah, qaabdhismeedka qalabka waa la hubiyaa lana hagaajiyaa si loo hubiyo xasilloonida qaab dhismeedka qalabka.
Daaweynta da'da waxaa loo sameeyaa si looga takhaluso culeyska gudaha iyo hagaajinta xasilloonida
3.Qodida qaybaha, caajiska mashiinka caajiska ah, ku shiidaya diyaaradda shaqeynaysa mashiinka wax lagu shiido, xoqista iyo xoqida dusha sare ee qalabka mashiinka gacanta, iyo hubinta tayada qaybaha la soo iibsaday.
Isku soo uruuri iyadoo la raacayo sawirka rakibaadda geedi socodka, kuna cabir sax ahaanta qalabka wax lagu cabiro
5. Laydhka qalabka korontada iyo badhanka hawlgalka,
6.Kadib dhammaystirka tijaabada goynta, iyo cabirka saxnaanta mashiinka oo dhan
Sida loogu shaqeeyo mashiinka wax lagu shiido ee guud
Hubi in aasaaska mashiinka mashiinku uu xasilloon yahay oo heer yahay. Hubi in qalabka korontada iyo korantada ugu weyn ee korontada ee qalabka ay isbarbar dhigayaan, iyo isku xir korontada.
Hubi in qaybaha saliidda lagu saliiday iyadoo loo eegayo jaantuska sifaynta iyo calaamadaha aaladda mashiinka
Ku rakib qalabka oo gacanta ku hagaaji shaashadda booska loo baahan yahay, U wareeji madaxa wax shiidaya xagasha loo baahan yahay. Miiska xisaabinta xagasha wuxuu tixraaci karaa buugga.
Habka gudbinta dunmiiqa waxay ku jirtaa wan. Bidixdiisa bidix ama midig, waxaa ku yaal sedex wiish oo levers ah. Si aad xawaaraha u bedesho, hagaaji kabaalka wareega si aad u hesho xawaare dunmiiqa kala duwan. Xusuusin: xawaaraha waa in la badalaa marka mashiinka la joojiyo.
Mashiinka toosan, ku rakib cutter dusha hoose ee dunmiiqa. Mashiinka waxaa sidoo kale lagu qalabeeyaa trestle axdi qarameedka iyo cut magaabay si ay u ogaadaan hawlaha axdi qarameedka kala duwan.
Markaad wax shiidaysid, isku day inaad yareyso laalaadda wiishka wanka iyo kan wax gooya. Markaad shiidaysid ka dib hagaajinta booska, si adag u qabo dhammaan lamaanaha dhaqaaqaaya ee aan daruuriga u ahayn dhaqaajinta (sida wanka, jihada dheer iyo jihada transverse) si loo hagaajiyo qallafsanaanta mashiinka. Awoodda haysaa waa inaysan aad u weyneyn si looga fogaado qallooca.
Mashiinka ayaa leh batoonka badhanka. Waxay ku qalabeysan tahay badhanka degdegga ah, kaas oo isla markiiba la cadaadin karo marka xaalad aan caadi ahayn ay muuqato. Sidoo kale waxaa jira biiro bilowga koronto. Dhibaato kadib, si aad markale ubilaabato, marka hore batoonka badhanka degdegga ah dhinaca bidix u jeedi xagal si aad dib ugu dejiso, ka dib riix batoonka korontada si aad mashiinka u bilowdo.